chhalphal News - पोर्चुगलमा नेपालीहरुले उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्ः गीता राना
पोर्चुगलमा नेपालीहरुले उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्ः गीता राना
मङ्गलबार, २५ पुष २०७४, १२ : १५
पोखराकी गीता राना विगत ४ बर्षदेखि पोर्चुगलमा कृषि व्यवसाय गरिरहेकी छिन् । यहि व्यवसायमार्फत उनले केहि नेपालीहरुलाई पनि रोजगारी दिईरहेकी छिन् । पोर्चुगलमा रहेर पनि नेपाली समुदायको हक हितमा बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा सक्रिय उनी नेपाली नारी समाज पोर्चुगलको सदस्य पनि हुन् । व्यवसाय र सामाजिक कार्य दुबैमा सक्रिय राणाले पोर्चुगर्लमा भोगेका दुःख सुख र नेपाली समुदायको वर्तमान अवस्थाका बारेमा राना सँग छलफस सहकर्मी गंगा बहादुर नेम्कुलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
हाल पोर्चुगलमा के गरिरहनुभएको छ ?
म पोर्चुगलको दक्षिण क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय गरिरहेको छु । मैले बिगत ४ बर्षदेखि कृषि व्यवसाय गरिरहेको छु । यहाँ कृषिलाई राम्रो पेशाको रुपमा लिईन्छ । कृषि पेशालाई पोर्चुगलको मेरुदण्ड मानिन्छ । नेपालीहरुले पनि मेरो व्यवसायमा सहयोग गरिरहनुभएको छ । पछिल्लो समय यहाँ कामदारको माग उच्च रहेको पाएको छु ।
तपाई त पोचुगर्लमा नेपाली समुदायले आयोजना गर्ने बिभिन्नि कार्यक्रममा पनि देखिनुहुन्छ । सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय व्यवसायमा बढी केन्द्रित हुनुभएको हो ?
पछिल्लो समय म लिस्वनमा बस्दिन । लिस्वन बाहिर बस्ने भएकोले नेपाली समुदायका बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागि हुन समय अभाव हुन्छ । व्यवसायलाई पनि समय दिनुपर्ने र दक्षिण पोर्चुगलमा धेरै कार्यक्रमहरु पनि नहुने भएकोले नेपाली कार्यक्रमहरुमा सहभागि नभएको हो ।
आगामी दिनमा नेपाली समुदायप्रति तपाईको भूमिका के रहन्छ ?
नेपालीहरुको हक हितको लागि सबै नेपाली एक हुनुपर्दछ । सबै मिलेर नयाँ आएका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । हामी पुरान नेपालीहरुले नयाँ आउनेहरुको हक हितका लागि बिभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्नुपर्दछ । उनीहरुको हक हितका लागि र नेपाली समुदायलाई पोर्चुगलको वातावरणमा घुलमिल गराउन सक्ने खालका कार्यक्रम र योजना तय गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । नेपाली समुदायले गर्ने बिभिन्न कार्यक्रमहरुले नेपाल र नेपाली संस्कृतिलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुग्दछ ।
तपाईका नयाँ योजना के छ ?
म आफु सेटल भैसकेको अबस्थामा अबको मेरो योजना भनेकै नयाँ आएका नेपालीहरुको हक हितकै लागि लागिपर्ने हो । उनीहरुलाई सकेको सहयोग यस अघि पनि गर्दै आएको छु र आगामी दिनमा पनि गर्नेछु । आर्थिक सहयोग गर्न नसकिएला तर यहाँ आफुले जानेको ज्ञान सिपले भ्याएसम्म उनीहरुलाई काम खोजिदिने र यहाँ कसरी सेटल हुन सकिन्छ भन्नेबारे सल्लाहा सुझाव दिने गरेको छु ।
पोर्चुगलमा नेपालीहरुको अबस्था के छ ?
पोर्चुगलमा धेरै क्षेत्रमा नेपालीहरु सफल भएको पाएको छु । होटल व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा नेपालीहरुले उल्लेख्य सफलता पाएका छन् । ट्रान्पोर्टेशनमा पनि नेपालीहरुले राम्रो गरिरहेका छन् । केही नेपालीले टुकटुकबाट मगन्य आम्दानी गरेको पाएको छु । यहाँ नेपाली महिलाहरुले पनि टुकटुक चलाएर राम्रो आय आर्जन गरिरहेका छन् । आफु सक्षम छ भने पोर्चुगलमा सबै क्षेत्रमा सफल हुन सकिन्छ । पोर्चुगलमा नेपाली महिलाहरुपनि दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।
महिला हकहितको लागि लड्ने पोर्चुगलमा कुनै संघ संस्था छ ?
नेपाली नारी समाज पोर्चुगल भन्ने संस्था छ । जुन संस्थाले नेपाली महिलाको हकहितको लागि काम गर्छ । म पनि त्यसको सदस्य छु । महिला हकहितको लागि यो संस्थाले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ । यस संस्थाले नेपाली महिलाहरुलाई बिभिन्न किसिमका सीपमुलक तालिमहरु पनि दिने गरेको छ । यो संस्थाले भाषा कक्षा पनि संच्चालन गर्ने गरेको छ । व्युटिसियन लगायतका यस संस्थाले दिएको तालिमबाट धेरै नेपाली महिलाहरुले लाभ लिएका छन् । आपत्मा परेका नारीहरुलाई सहयोग गर्ने, कामको अवसर जुटाईदिने काम पनि यो संस्थाले गरिरहेको छ ।
नेपाली महिलाहरु यो संस्थासँग कसरी जोडिन सक्छन् त ?
कोहिपनि महिला दिदिवहीनीहरु कुनै आपत्मा पर्नुभयो भने नारी समाज पोर्चुगललाई संझन सक्नुहुन्छ । यसका सदस्यहरुलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । मलाई मेरो नम्मरमा संपर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ । मेरो नम्मर ९६९४२२९६३ हो । नेपाली नारी समाजले महिलालाई मात्र होईन पुरुषलाई पनि सहयोग गर्छ ।
पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायलाई दिनुपर्ने तपाई केहि संदेश छ ?
यहाँ रहेका नेपालीहरु एक भएर नेपालीको समस्यासँग लड्नुपर्दछ । नेपाललाई पोचुर्गलमा चिनाउन पनि बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्नुपर्दछ । नयाँ आएका नेपालीहरुलाई पर्ने समस्यामा एक भएर लड्नुपर्दछ । पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरुमा मेरो संदेश यहि हो ।